Wholesale 6x12m Heavy Duty PVC Yemuchato Party Tende Ine Moto Unodzosera Tende uye Greenhouse | Kukunda
6x12m Heavy Duty PVC Yemuchato Party Tende Ine Moto Retardant
4-19 Zvimedu 20-49 Zvidimbu > = 50Pieces
Iyi tende repati yakakosha kune chero zviitiko zvekunze, senge zvinoratidzira, michato, mapato, bharuki. Iwe unogona zvakare kuiisa mumashure medu seyakakura, yakanaka sunshade yekurapa yemhuri yako nevashanyi.
1) Moto unodzora pamusoro pevhavha nemadziro anosangana neFlame Retardant Standard M2
2) Yakakwira mhando, inorema basa fomati, ine yakasimba maconnectors nesimbi base
3) PVC yepamusoro chifukidziro ine seams kupisa-chisimbiso, 100% waterproo
Model Nhamba WS-P2612
Item zita 6x12m Heavy Duty PVC Yemuchato Party Tende ine Moto Retardant
Kukura kwechigadzirwa 20x40ft (6x12m)
Chakafukidza zvinhu 500gsm Moto unodzora PVC
Masvingo emadziro 380gsm Moto unodzora PVC
Kurema 266 KG
MOQ 4 zvidimbu
20x40ft (6x12m) Dhizaini Yehunyanzvi
Yedu tende tende ine yakatwasuka gumbo dhizaini uye yekedhedral dhizaini padenga inopa yakavhurika-mhepo kunzwa kune akasiyana akasiyana ekunze zviitiko. Yakakura yeMichato, zviitiko zvekambani, mapato ekunze uye zvimwe!
Isu tinotora yepamusoro giredhi kwakakurudzira machubhu ayo anogona kudzivirira iwo machubhu kubva kuora uye ngura. Yakawedzera kona rutsigiro danda rinogadzira yakasarudzika katatu dhizaini, ichiita iro repamusoro denga fureni riwedzere kugadzikana & Firm; uye mamwe mabara epasi anoita kuti tende riwedzere kugadzikana uye kusagadzikana nemhepo pasi.
Luxury yakagadzirirwa PVC yepamusoro uye mativi emadziro anogona kusangana neFlame Retardant Standard M2. 100% isina mvura, kudzivirirwa kwe UV kupa mamiriro akasununguka echiitiko chako. Zvakare, inoratidzira inobvisika, zippered yekupinda uye 12 PVC windows kubvumira yakawanda mweya uye mwenje mukati.
Pamusoro petende repati, isu tinoshandisa yakagadziriswa mabara ekudzivirira kudonha kwebasa rinorema rePVC jira rinokonzerwa nekuunganidzwa kwemvura. Zvakare, chimiro chakakwidziridzwa chinogona kudzivirira zvirinani tende kubva kumhepo uye kugadzirisa kugadzikana kwayo uye kuchengetedzeka.
Matanda akakwidziridzwa, Rust Resistant Sisitimu: yepamusoro simbi furemu uye yesimbi kona yekubatana inoita kuti denga redu rigare rakasimba.
Iwo madziro emusuwo uye musuwo unogona kufambiswa zviri nyore.Kune mabhora ekusvetuka pazvibatanidza zvekuwedzera kudzikama kweiyo furemu, denga uye madziro emativi akasungirirwa pafuremu nechena bungee mabhora.
Pashure: Yakachipa 3 × 3 Chiitiko Tende Kunze
Zvadaro: 10x20Ft (3x6M) Heavy Duty PVC Party Tende